Ny fampiharana radio efatra tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny radio FM dia zavatra nampidirina finday rehetra taloha. Raha nisy maodely tsy nanana radio FM dia faningana lehibe izany teo amin'ny tsena. Na dia, miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia nanomboka nanjavona ary ankehitriny ny mifanohitra amin'izay fotsiny no zava-misy. Ankehitriny dia miavaka izany raha misy telefaona misy radio. Ka raha te hihaino radio amin'ny telefaona ianao dia tsy maintsy hampiasa fampiharana.
Ny ampahany tsara dia ny fisian'ny fisian'ny fampiharana vitsivitsy izay mamela antsika hihaino radio. Ka mbola afaka mankafy azy amin'ny finday Android isika. ny Avelanay miaraka aminao ireo fampiharana tsara indrindra amin'ity karazana ity.
Azonao atao ny misintona ireo rindranasa rehetra ireo amin'ny fitaovanao Android. Misaotra azy ireo fa afaka mankafy ireo gara tianao amin'ny findainao ianao isaky ny tianao. Fampiharana inona avy no nahatonga ny lisitray?
1 Radio FM - Stasion maimaimpoana
3 Radio Tsotra - FM & AM Live
4 Radio Espana
Radio FM - Stasion maimaimpoana
Manokatra ny lisitra izahay amin'ity rindranasa ity izay malaza indrindra amin'ireo mpampiasa Android. Satria momba iray amin'ireo alaina indrindra ao amin'ny sokajy ao amin'ny Google Play. Ka afaka nanao zavatra tsara izy ireo ka betsaka ny mpampiasa liana amin'izany. Misongadina izy io amin'ny fisian'ny gara misy maro. Satria misy gara mihoatra ny 30.000 avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao misy. Voalamina anaty sokajy daholo izy rehetra, ka mora ny mahita izay tadiavintsika.
Maimaimpoana ny fampidinana ity rindranasa radio ho an'ny Android ity. Ho fanampin'izay, tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny.
Iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra amin'ity sokajy ity, izay azo antoka fa ho fantatry ny mpampiasa maro. Izy io dia heverina ho safidy tsara indrindra ampiasain'ny mpampiasa maro. Misongadina indrindra izy amin'ny fisian'ny gara miisa 100.000 mahery eran'izao tontolo izao. Ireo rehetra ireo dia voasokajy araka ny sokajy misy azy avy. Ka tsy isalasalana fa misy safidy lehibe azo alaina amin'ny tsiro rehetra. Ary tsy maintsy asongadino ny interface interface, izay tsara ary mahatonga ny fampiasana azy io ahazoana aina kokoa ho an'ny mpampiasa.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia ao anaty aza izahay dia mividy raha sanatria te-hiloka amin'ny serivisy fisoratana anarana. Safidy tena feno.
Radio Tsotra - FM & AM Live
Fahatelo, mahita rindrambaiko Android iray hafa izay miavaka amin'ny fisian'ireo toerana fitobiana be dia be azo atao. Amin'ity tranga ity dia mahita gara miisa 40.000 mahery isika. Ho fanampin'izay, voalamina arakaraka ny firenenao sy ny lahy na ny vavy izy ireo. Ka mora be ny mahita zavatra mahaliana antsika amin'ny fotoana rehetra. Inona koa, ilaina ny manasongadina ny endriny, miorina amin'ny Material Design. Ka mitazona interface tsara izay mahatonga ny fampiasana azy ho fifaliana.
Maimaimpoana ny fampidinana ity rindranasa radio ho an'ny Android ity. Na dia mahita doka sy fividianana ao anatiny aza izahay.
Radio Tsotra - Radio FM AM Online Live Free
Raha sanatria izay fitiavanao dia gara fotsiny avy any Espana, avy eo azonao atao ny mampiasa ity fampiharana ity. Hatramin'io dia hitantsika ireo fiantsonana lehibe rehetra misy eto amin'ny firenentsika. Amin'izay mba afaka mihaino ireo fandaharana tianao indrindra amin'ny finday rehetra ianao. Misy ny gara malaza rehetra misy, izay ilazanay an'i Kiss FM, Los 40, Cadena SER, Cadena 100… Ireo rehetra azonao eritreretina.
Maimaimpoana ny fampidinana ity rindranasa radio ho an'ny Android ity. Na dia ao anaty fampiharana aza dia mahita doka izahay.
Developer: Fampiharana Oxymore
Ireto fampiharana efatra ireto no tsara indrindra azontsika jerena ao anatin'ny sokajy an'ny rindranasa radio ho an'ny Android. Samy manana ny tanjany avy ny tsirairay, indrindra ny momba ireo telo voalohany ny gara marobe avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao manolotra. Mora ny mahita zavatra izay tiantsika amin'izy ireo. Safidy feno avokoa ireo efatra, noho izany dia miankina amin'ny safidin'ny tena manokana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana radio tsara indrindra ho an'ny Android
Ny sary voalohany an'ny Samsung DeX ho an'ny Galaxy S9 dia voasivana
Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge + ary Note 5 dia afaka mahazo Android Oreo